Didier Ratsiraka : Tsy misy afaka milalao ny ain'i Malagasy
mercredi, 17 mars 2021 16:27
Naneho hevitra tao amin'ny pejy facebook ny filoha teo aloha Didier Ratsiraka mikasika ny vakisiny fanefitra amin'ny Covid-19.
Nanambara izy fa, na ny taonany efa mandroso, na ny andraikitra maha filoham-pirenena teo aloha notanany dia manosika azy hilaza ny heviny mikasika ity resaka fanaovam-bakisiny ity.
Tany aloha, hoy izy, dia tsy nety nanao vakisiny iadiana amin'ny poliomyélite ny olona, fa vokatry ny fandresen-dahatra sy fanentanana dia niroso tamin'izany fanaovam-bakisiny fanefitra amin'ny lefakozatra izany ny mponina.
Ankehitriny indray kosa dia ny mifanohitra amin'izany indray no misy, satria dia raràna tsy anao vakisiny amin'ity areti-mandoza Covid-19 ity indray ny olona.
Tsy misy afaka mandràra izany hoy ny Filoha teo aloha Didier Ratsiraka, ary tsy azo lalaovina ny ain'ireo mpiray tanindrazana.
Izaho manokana, hoy hatrany izy, dia tsy mamporisika ny ampiasana ny vakisiny BioNTech vitan'ny Pfizer, satria mila vata fampangatsiahana ambanin'ny -80°C ny fitehirizana sy ny fitaterana izany vakisiny izany, ka sarotra tanterahina eto amintsika.
Tsy mazoto ihany koa ny filoha teo aloha Didier Ratsiraka amin'ny vakisiny AstraZeneca, izay fikarohan'ny université de Oxford, satria maro loatra ny ahiahy sy ny ady hevitra momba azy io.
Betsaka anefa eo amin'ny tsena iraisam-pirenena, hoy hatrany izy, ireo vakisiny azo ampiasaina, toy ny Moderna, ny an'i Johnson et Johnson, ny vakisiny sinoa, ny an'i Rosianina sy ireo maro hafa.
Nofaranany tamin'ny teny fialan-tsiny mahazatra azy hatrany moa ity fanambaràna ny heviny momba ity vakisiny ity, fa dia ialany tsiny, ialany fondro, ialany salohy fito, ho an'izay mety ho tafitohana, na mety voadona ny ambom-po amin'izao filazany ny heviny izao, fa tsy maintsy milaza ny fomba fijeriny kosa ny Mpanomponareo hoy Didier Ratsiraka.